1950 देखि लोकप्रिय प्रेम गीत
संगीत संगीत शिक्षा
1950 का दशकको मायालु गीतहरू
1950 को दशक पहिले धेरै दशकको थियो। सीट बेल्ट 1952 मा पेश गरिएको थियो, डिज्नील्याण्ड 1956 मा खोल्यो, र नासा 1954 मा स्थापना भएको थियो। संगीतको संसारमा, 1950 को विधेयक हेलई र "हिउँको चट्टानको चक्कर" जस्तै हिट र चट्टानको जन्मको रूपमा भनिन्छ। हवाइभवनहरू हावामा परेका छन्। यस अवधिमा चट्टान र रोलका अलावा, देश संगीत र लोक संगीत पनि लोकप्रिय थिए। 1950 को दशक मा गायक समूह द्वारा दर्ज गरिएको गीत गाने को संगीत चार्ट मा चढ्यो। The Penguins द्वारा "पृथ्वी एन्जिल" जस्तै हिट्स, "पाँच ओपन रात मा" को पाँच साटिनहरु र "द ग्रेट प्रेन्डर" द पप्टार्स द्वारा '50s मा प्रकाशित गरियो।
एभली भाइहरू। हल्टन सङ्ग्रह - स्ट्रिंगर / सङ्ग्रह फोटोहरू / गेट छविहरू
एक गीत द ओभरली ब्रदर्स द्वारा लोकप्रिय गरिएको थियो; यो पति र पत्नी गाना लेखक बौडलेक्स र फेलिस ब्रायन द्वारा लेखिएको थियो। भनिएको गीत 1957 मा प्रकाशित भएको थियो र एउटा ठूलो हिट भयो। "बाय बय लव" को एक संस्करण रे चार्ल्स द्वारा पनि रेकर्ड गरिएको थियो।
मलाई लाग्छ कि म रोइरहेछु।
यो एलीली ब्रदर्सको यो पुरानो क्लिप यूट्यूबको "बाइट ब्युई माया" गीत गाएर हेर्नुहोस्।
जन्ना रे, 1953. कीरोन / गेट छविहरू
चर्चिल कोहमन द्वारा लिखित एक गीत र 1951 मा जन्ना रे र द द लाड्स द्वारा दर्ज गरिएको गीत। अन्य कलाकार जो यस गीत को दर्ज गरे, लिन एन्ड एन्डसन, रे चार्ल्स र क्रिस्टल गेल शामिल छन्।
सनशाइन भेट्टाउन सकिन्छ
बादल आकाशको पछि,
यसकारण तपाईंको कपाल तल निस्केर जानुहोस् र रुनुहोस्
सुनो जॉननी रे YouTube मा "रो" गाई।
डू डब्ल्यूप समूहले पेंगुइनले कैलिन्सको क्यालिफोर्नियामा लस एन्जलसमा 1955 मा 'डल्फिनको हलिवुड' रेकर्ड स्टोरमा एक इन-स्टोर उपस्थिति बनाउँछ। माइकल ओक्स अभिलेखागार / गेट छवियाँ
यदि तपाईं भविष्य प्रशंसकलाई फिर्ता साथी साथी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो गीत चलचित्रको महत्त्वपूर्ण भागबाट याद गर्न सक्नुहुन्छ; उच्च विद्यालय नृत्य दृश्य। यो प्रेम गीत कर्टिस विलियम्स, जेसी बेल्विन र ग्येलल होजलाई श्रेय दिइएको छ; यो दियोटोन लेबल अन्तर्गत 1954 मा द पेंगुइनद्वारा रेकर्ड गरिएको थियो।
पृथ्वी स्वर्गदूत, पृथ्वी परी
के तिमी मेरो हो?
मेरो प्रिय प्रिय
तिमीलाई सबै समय माया गर्छु
म बस मूर्ख हुँ
तपाईंसँग प्रेममा मूर्ख
YouTube मा यो गीत सुन्नुहोस्।
जैकी विल्सन, 1960। एलिस ओक्स / गेट इमेज
यो गीत लेखिएको बेरी गॉर्डी, ग्वेन गड्डी, टाइरन कार्लो। यो जैकी विल्सनले रेकर्ड गरीएको थियो र 1958 मा रिङ्गसेक्स लेबल अन्तर्गत रिलीज गरियो।
मेरो हृदय रोइरहेछ ', रोमन'
मेरा तकियाहरू कहिल्यै सुकेको छैन
जैकी विल्सन हेर्नुहोस् YouTube को आफ्नो हिट गीत शिष्टाचार।
अझै पनि रातको रातमा
पाँच सट्टा। माइकल ओक्स अभिलेखागार / गेट छवियाँ
"अब सम्मको नाइटमा" शीर्षकले पनि चिनिन्छ। यो गाना पाँच साजिश नेतृत्व गायक, फ्रेड पार्िस द्वारा लिखित थियो, र 1956 मा पांच Satins द्वारा Standord लेबल को तहत प्रकाशित। पॉल अनका 1969मा यो गीतको एक संस्करण रेकर्ड गरियो।
रातको अझै पनि
मैले तिमीलाई पकडें
'म मलाई माया गर्छु
तिमीलाई माया गर्छु
म कहिल्यै भन्नेछु
यूट्यूबमा यस गीतको पाँच सट्टाको हार्दिक प्रदर्शन हेर्नुहोस्।
नेट 'किंग' कोल, 1950। माइकल ओक्स अभिलेखागार / गेट छवियाँ
यो क्लासिक गीत, जसले लियोनार्डो दा भिन्कीको प्रसिद्ध चित्रकलालाई उल्लेख गरेको छ, रे इभान्स र जे लिविन्सनले लेखेका थिए। गीत नेट किंग कोल द्वारा रेकर्ड गरियो र संयुक्त राज्य अमरीका को 1 999 को फिल्म कप्तान केरी मा विशेष गरीएको थियो
मोना लिसा, मोना लिसा, पुरुषहरूले तपाईंलाई नाम राखेका छन्
तपाईं रहस्यमय मुस्कान संग महिला जस्तै हुनुहुन्छ
के यो केवल 'कारण तपाईं अकेला हुनुहुन्छ किनकि तिनीहरूले तपाईंलाई दोष लगाएका छन्?
उनको मुस्कानमा मोना लिसा अजनबीको लागि?
YouTube मा यस गीतको नेट किंग कोलले सुन्दर रङलाई सुन्नुहोस्।
(एलआर) हर्ब रीड, डेव लिंच, टोनी विलियम्स, जेला टेलर र पल रोबियाको शुरुवात चट्टान र रोल समूह 'द प्लैटर्स' लगभग 1955 मा सुरुवात गर्दछ। माइकल ओक्स अभिलेखागार / गेट छविहरू
सङ्गीत निर्माता, गीतकार र प्रबन्धक शमूएल "बक्स" राम द्वारा लिखित एक गीत; यो 1955 मा रिलीज भएको थियो र प्लैटर्सको सबैभन्दा ठूलो हिट बनेको थियो।
ओह हाँ, म महान छुटकारा छु
म राम्रो गर्दैछु
मेरो आवश्यकता यस्तो छ
म धेरै कुरा गर्छु
म अकेला छु तर कुनै पनि भन्न सक्दिन
यो दुर्लभ क्लिप हेर्नुहोस् प्लेप्टरहरू YouTube मा "द ग्रेट प्रिन्टेंडर" गाई।
नेट किंग कोले एक कन्सर्ट मा। भियना। 1960 को बारेमा। इमेजो / गेट छविहरू
1951 मा प्रकाशित, यस गीत को गीत सिल्भिया डी द्वारा लिखित र सिडनी लिप्मन द्वारा रचना गरिएको संगीत द्वारा लेखिएको थियो। यो गीत नेट किंग कोल द्वारा रेकर्ड गरियो र एउटा ठूलो हिट भयो।
तिनीहरू हामीलाई हामी धेरै जवान छौं भनेर बताउन प्रयास गर्छौं
धेरै जवान वास्तवमा प्रेममा रहन
तिनीहरू भन्छन् कि एक शब्द मनपर्छ
हामीले सुनेको शब्द
तर यसको अर्थ बुझ्न सकिएन
यूट्यूबमा यो बेग्लै ट्युनको नेट राजा कोलको रेकर्डिङ सुन्नुहोस्।
तपाईंको चीटिन हार्ट
हङ्क विलियम्स, 1945. खाली अभिलेखागार / गेट छवियाँ
यो "ब्रेक-अप पछि" गीत गायन-गीतकार हङ्क विलियम्स एसआर द्वारा 1952 मा लेखिएको थियो। यस गीतको विलियम्सको रेकर्डिङ 1953 मा रिहा गरियो; उनको मृत्यु पछि। "तपाईंको चीटिन 'हार्ट" उनको छोरा, हङ्क विलियम्स' जूनियर, लुई आर्मस्ट्रांग , रे चार्ल्स, र पिट्सी कलाइन सहित अन्य कलाकारहरू पनि समावेश थिए।
तपाईंको चीटिनको हृदय,
तिमी रोए र रुन्छौ,
र सुत्न प्रयास गर्नुहोस्,
तर निद्रा आउनेछैन,
तपाईंको चीनाटिन हृदय, तपाईंलाई भन्नेछ
YouTube मा हङ्क विलियम्स द्वारा "तपाईंको चीटिन 'हार्ट सुन्नुहोस्।
किन मूर्खहरू प्रेममा पर्छन्
फ्रान्की लिमोन र किशोर। Redferns / Getty Images
1956 मा जी लेबल अन्तर्गत जारी गरियो; यो गीत फ्रान्की लिमोन र मोरिस लेवीको लागि श्रेय गरिन्छ। यो 1956 मा त्यसपछि 13 वर्षीया फ्रान्की लिमोन र द किशोरहरूका लागि ठूलो हिट भए।
मूर्खहरू किन प्रेममा पर्छन्?
किन पक्षहरूले यति समलैंगिक गीत गाए?
र प्रेमीहरू दिनको विश्रामको प्रतीक्षा गर्छन्
तिनीहरू किन प्रेममा पर्छन्?
यस क्लासिक क्लिप फ्रान्की लिमोन र किशोर किशोरहरूको पहिलो YouTube प्रदर्शनमा प्रदर्शन।
शीत ठुलो हृदय
हङ्क विलियम्स र हङ्क विलियम्स जेआर रेडफर्न / गेट इमेज
यो देश गीत लेखिएको र गायक-गीतकार हङ्क विलियम्सद्वारा रेकर्ड गरिएको थियो। यो पहिलो 1951 मा रिलीज गरिएको थियो र यसपछि विभिन्न कलाकारहरू द्वारा रेकर्ड गरिएको छ; देखि Dinah वाशिंगटन सम्म Norah जोन्स
मेरो प्रिय महोत्सव को देखाउन को लागी कि तिमी मेरो हरेक सपना हो
यद्यपि तपाईं डराउँछन् प्रत्येक कुरा म केवल केहि बुराई योजना हो
तपाईंको भर्खरैको अतीतको मेमोरीले हामीलाई धेरै टाढा राख्छ
म तपाईंको शंकास्पद दिमागलाई मुक्त गर्न र तपाईंको चिसो चिसो हृदयलाई पिउन सक्छु
ह्याक विलियम्सहरू YouTube मा यो सुन्दर रूपमा लिखित गीत प्रदर्शन गर्नुहोस्।
किनकि मैले तिमीलाई छैन
वोकल क्विन्टेट 'द स्किलिनिर्स' पो न्यूयर्कका एक प्रचार तस्वीरका लागि न्यूयर्क स्टुडियो लगभग 195 9मा छ। यो समूह जिमी बिएमन्ट, जेनेट वैगेल, वली लेजर, जोसेस्चेन र जैकी टेलर हुन्। माइकल ओक्स अभिलेखागार / गेट छवियाँ
एक यादगार ballad कि 1958 मा रिलीज गरियो र मुखर समूह द्वारा स्केलिनिनर्स द्वारा प्रसिद्ध बनाइयो। यो गीत समूहको नेतृत्व गायक, जेम्स बीउमन्ट, र यूसुफ रकद्वारा लेखिएको थियो।
मेरो योजनाहरू र योजनाहरू छैनन्
र मलाई आशा र सपना छैन
मसँग केहि छैन
किनकि मैले तपाईंलाई छैन
YouTube को यो क्लासिक प्रेम गीत शिष्टाचार सुन्नुहोस्।
त्यो अमोर हो
ड्यान मार्टिन, 1955. हल्टन आर्टिकल / गेट इमेज
यो गीत हैरी वरेन द्वारा बनाइएको थियो र 1953 मा गायक / अभिनेता डीन मार्टिन द्वारा रेकर्ड गरिएको थियो। "यो अमोर" मार्टिनको हस्ताक्षर गीतहरु मध्ये एक हो।
जब चन्द्रले तपाईंको आँखालाई हिर्काउँछ
ठूलो पिज्जा जस्तै
त्यो अचम्म छ
संसारले चमक लगाउँदछ
तपाईंको धेरै वाइनको जस्तो छ
हेर्नुहोस् डीन मार्टिन YouTube को यो गीत शिष्टाचार गर्छन।
सीराका 1955: अमेरिकन पप र ज्याज गायक जो स्ट्यान्डर्ड (1917-2008) एक रेकर्डिङ स्टुडियोमा एक माइक्रोफोनमा माइक्रोफोनमा छिरहेकी छिन्। माइकल ओक्स अभिलेखागार / गेट छवियाँ
राम्रो लेखिएको गीतको चिन्हहरू मध्ये एक हो रेकर्ड गरिएको पटकको संख्या र "तपाईंसँग मलाई" निश्चित रूप देखि चिन्ह हिट। यो गीत चिलिटन मूल्य, रेडड स्टीवर्ट, र पै वेवे राजामा जम्मा गरिएको छ। यो मूलतः सुई थिम्पसन द्वारा दर्ज गरिएको थियो तर सबैभन्दा लोकप्रिय संस्करण यो स्टाफर्ड द्वारा 1952 मा रिलीज भएको छ। यस गीतमा पनी अन्य कलाकारहरूले पल अक्का, पोती सिलाइन, कोनी फ्रान्सिस, एनी मरे र पट्टी पृष्ठ समावेश गर्दछ।
नील साथ पिरामिड हेर्नुहोस्
एक ट्रोटिक आइलमा सूर्य उज्यालो हेर्नुहोस्
तर बस सम्झना, प्रिय, सबै समय
जब तपाईं YouTube को माध्यम बाट जो Stafford को हिट गीत सुन्नुहुन्छ अप्ठेरो महसुस गर्नुहोस्।
तपाईं यति राम्रो हुनुहुन्छ
बायाँमा एडी फ्लोइडसँग फाल्कन, 19589मा एक स्टूडियो समूह चित्रका लागी रेफ्रेन्स / गेट छविहरू
एक गीत जो भोक समूह द्वारा फाल्कन्स द्वारा दर्ज गरिएको थियो र 1958 मा फ्लिक लेबल को अंतर्गत रिलीज भयो। यो गीत हिट भयो र विशेषताहरूको नेतृत्वमा गायक जो स्टेबब्स भयो।
तपाईं यति राम्रो हुनुहुन्छ, तपाई धेरै राम्रो हुनुहुन्छ
तपाईं मेरा हुनुहुन्छ, तपाईं मेरा हुनुहुन्छ
म हिँड्छु, र म तिम्रो बारे कुरा गर्छु
यूट्यूबबाट यस गीतको फलकहरूको रेकर्डिङ सुन्नुहोस्।
स्ट्रोफिक गीतको लागि दिशानिर्देशहरू बुझ्न
इतिहास "हेल्ल हेल्टर"
फ्लाइंग इनको बारेमा गीतहरू
काम गीतहरू के हो?
सङ्गीत इतिहास: शताब्दी भन्दा बढी संगीतको प्रकार
10 नि: शुल्क संगीत शिक्षा शब्द सर्चहरू र अन्य खेलहरू
ह्याण्ड मेटल संगीत यसको नाम कसरी प्राप्त भयो?
1920 देखि 1950 सम्मको क्लासिक लव गीत
संगीत साधनको वर्गीकरण: साच-होर्नबोस्टेल प्रणाली
AABA गीत फारम
बेस्ट जॉन ह्यूजेस सिनेमाहरू
सम्पादकीय कार्टूनमा बक्सर विद्रोह
सबैभन्दा ठूलो आगमन पछि विन इन राइडर कप इतिहास
एक शब्दावली के हो?
साधारण फ्रान्सीसी इडीम 'एवो डु पैन सुर ला प्लान्से' को अर्थ
ईसाई धर्ममा उपदेशकको अर्थ सिक्नुहोस्
'शहरी कथा' मूवी फ्रान्चिस
धम्की दिएर उल्टो
CSULA GPA, SAT र ACT डेटा
क्यालेनको चरित्रलाई 'अस्थायी' भनिन्छ
"धेरै जीवन, धेरै परास्नातक" पुस्तक को एक समीक्षा डा। ब्रायन वेइस द्वारा
आधा क्रिम्प गिप: आवश्यक चढाई ह्यान्डहोल्ड
कलाकारको कपीराइट सोधिने प्रश्न: के मैले फोटोको चित्रकारी बनाउन सक्छु?
लेबनान घाटी कलेज प्रवेश
के तपाईं धेरै पटक छुट्याउन सक्नुहुन्छ?
वैक्यूममा मानव शरीर के हुन्छ?
प्लांट सेल संरचना र आयोजन बारे जान्नुहोस्
बाब केन को बैटमैन भूत कलाकार
C / C ++ / C # मा शीर्ष खुला स्रोत परियोजनाहरु
गोल्फ कोर्समा 'पोट बङ्कर' के हो?
द्वितीय विश्वयुद्ध: ग्वाडलकालको युद्ध